I-LiDAR kunye ne-DIELMO 3D - Geofumadas
LiDAR kunye ne-DIELMO 3D
NgoJulayi, 2011 Iiphotography, Geospatial - GIS
I-DIELMO 3D SL inolwazi oluphangaleleyo kunyango lwedatha ye-LiDAR, iqhube iiprojekthi ezininzi njengomthengisi kunye nomvelisi wedatha ye-LiDAR eSpain, kwaye kwakhona kwi2003 iphuhlisa eyayo isoftware yokulungiselela idatha ye-LiDAR ebonelela ukuphuculwa okukhulu okungavumeli Isoftware yezorhwebo
Olona ncedo luphambili olubonelelwe yi-DIELMO kukuba xa sisebenza nesoftware yethu, silawula onke amanyathelo afanelekileyo onyango lolwazi ngendlela ezenzekelayo, ukusuka kwizixhobo zokulawula umgangatho kunye nokuveliswa kweemveliso zokugqibela, ukuguqula ifomathi, i-mosaic , njl njl, nokukwazi ukuzilungelelanisa ngokweemfuno zabathengi. Kwelinye icala, siyaqhubeka siphucula ukusebenza okutsha kwaye sinesebe le-R & D elizinikezele ngokukodwa kuphuhliso olugxile kunyango lwedatha ye-LiDAR, kwaye loo nto iyakusivumela ukuba sizisombulule ngokufanelekileyo iingxaki ezinokuthi ziphakame kwisizukulwana esahlukileyo. Iimveliso eziceliweyo kulo naluphi na uhlobo lweprojekthi.
Ngale ndlela, kwiminyaka edlulileyo kwaye ngenxa yeminikelo yabathengi bethu, i-DIELMO iphuhlise indlela ekhethekileyo ejolise ekufumaneni iimveliso ezifanelekileyo zeLiDAR kwimeko nganye. Ngesi sizathu siqinisekile ukuba sinikezela ngesona sisombululo sobugcisa kunye namava amaninzi okuqhuba naluphi na uhlobo lweprojekthi enxulumene nedatha ye-LiDAR.
Imigca yetekhnoloji yethu imi ngolu hlobo lulandelayo:
Itekhnoloji yeDelmo Server
Iiseva zeedatha I-LiDAR, ii-orthophotos kunye ne-MDT kwi-intanethi / intranet ekhethekileyo kwihlabathi liphela.
Dielmo 3D Umbukeli
Iimeko ezibonakalayo ze3D ezakhiwe ukulinganisa ngokusekelwe kwisoftware yeNASA yeHlabathi yoMoya.
Isoftware yasimahla yolawulo kunye nomgangatho wolawulo lwedatha yeLiDAR.
Isoftware yangaphakathi yophuhliso lwakho ukulungiselela ukulungiswa kwedatha yeLiDAR ehambelana neemfuno zakho.
Kwelinye icala, sisebenza kwi-R + D + mna kunye neengcali kumacandelo ahlukeneyo anjenge-hydraulics, amahlathi, umzobo, umnxibelelwano, ubunjineli baseburhulumenteni, okusingqongileyo. ukufumana iimveliso zokugqibela ezintsha ezifanelekileyo iimfuno zakho ezisekwe kwidatha yokugcina ye-LiDAR eneendleko eziphantsi kakhulu kwaye ivumele ukusetyenziswa kwedatha yeLiDAR kwizicelo ebezisenziwa kwiminyaka embalwa eyadlulayo zazingenakuphepheka.
I-DIELMO kuphela kwenkampani yaseSpain ekhoyo kwimicimbi ephambili enxulumene netekhnoloji ye-LiDAR kwihlabathi liphela (ILMF kunye ne-ELMF), ihamba njengemboniso kumabala ezorhwebo kunye nesithethi kwiingqungquthela zesayensi. Umphathi we-DIELMO, uJosé Carlos García, ukwayinxalenye ye-ELMF (Igqiza leeMephu zeLizwe le-European LiDAR) kwikomiti yezenzululwazi evela kwi2010.
Ngenxa yesicwangciso-qhinga sethu sokudibana kwamazwe aphesheya, i-DIELMO sele inabarhwebi abasasaza iimveliso kunye neenkonzo zethu eChile, eJapan, eMelika, e-Oceania ...
Silandele Twitter nangaphakathi www.dielmo.com
Ukukhutshwa kweendaba ka-Dielmo, epapashwe njengoxabiso lweGeofumadas.
Post edlulileyo«Edlulileyo GvSIG, Ukulwa neZithuba ezintsha ... Kubalulekile! Ingxabano?
Post Next Abafundi bacinga ntoni nge-Open Source GeospatialOkulandelayo "